=လူထုကျန်းမာရေး(လွဲမှားနေသော ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးစနစ်များ)=
၁. သွားတိုက် စဉ် အချိန်ကြာမြင့် စွာတိုက်ခြင်း၊
မကြာခဏသွားတိုက် ခြင်း ဖြင့် သွား ၏အပေါ်ယံလွှာတွေ စားသွား ပြီး
နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်ကို သုံးကြိမ်ခန့်
သွားတိုက်နိုင်ပြီး အနည်း ဆုံးမနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် တစ်ခါတိုက်လျှင်
၂-၃ မိနစ်ခန့် သာ တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
၂. သွားတိုက်စဉ် ကြမ်းတမ်းစွာ ဖိတိုက်ခြင်း။
ယင်းကဲ့သို့ဖိတိုက်ခြင်း က သွား တွေ ပိုဖြူလာမည်ဟု ယူဆမထားသင့်ပါ။
ဖြူလည်း မဖြူ လာနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ယင်းကဲ့သို့ ဖိတိုက်ခြင်းအားဖြင့်
သွားဖုံးများ၊ သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာများ စားသွား ကာ သွားပိုး ပိုစားနိုင်
အစားစားပြီးပြီးချင်း လူအများ စုက သွားတိုက်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒါက တော်တော်ကို လွဲနေတဲ့အမှားကြီးပါ။ ယင်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်
သွားကို ပိုမိုထိခိုက် ဒဏ်ရာရစေပါ တယ်။ အစာစားပြီးပြီးချင်း အစာထဲမှာ
ပါလာတဲ့ အက်ဆစ်တွေက သင့်ရဲ့ အပေါ်ယံကြွေလွှာကို အားနည်းစေပါတယ်။
ဒါကြောင့်စားပြီးနောက် မိနစ် ၃၀ လောက်ထားပြီး တံတွေးနဲ့ အစာထဲက
အက်ဆစ် တွေကို ဓာတ် ပြယ်စေပြီးမှ သွားတိုက်သင့်ပါတယ်။
သွားတိုက်ရာမှာ အချို့က ဝါးစားတဲ့အခြမ်းကိုသာ တိုက်လေ့ရှိ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အစာတွေက ဝါးတဲ့ဘက်မှာသာမက အခြား အတွင်း အပြင်တွေ မှာ
လည်း ကပ်နေပြီး သွားပိုးစားနိုင်တဲ့အတွက် သွားရဲ့ မျက်နှာပြင်အားလုံးကို
၅.သွားတိုက် ရာမှာ လျှာလျစ်လျရှုမထားသင့်ပါဘူး။
အကြောင်းက လျှာကလည်း ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွားတဲ့
၆.မိမိနဲ့သင့်တော်တဲ့ သွားပွတ်တံ မရွေးမိခြင်း။
သင့်တော်တဲ့ သွားပွတ်တံ တစ်ခုမှာ သင့်တော်တဲ့အရွယ်အစားနဲ့
၇. သွားပွတ်တံ ကို သေချာစွာ ဆေး ကြောမှု၊ အခြောက်ခံမှုမလုပ်ခြင်း။
၈. သွားပွတ်တံ ကိုမလဲဘဲ အသုံးပြုခြင်း။
ပုံမှန်အားဖြင့် သွားပွတ်တံ တစ်ချောင်းဟာ သုံးလတစ်ကြိမ် လဲ လှယ်သင့်
လူအများစုက စားပြီး သောက် ပြီးရင် အာလုပ်ကျင်းဖို့ သတိမရ တတ်ပါဘူး။
အာလုပ်ကျင်းခြင်း အားဖြင့် အစားအကြွင်းအကျန် တွေကို ဖယ်စေရုံသာမက
ကြွေလွှာ တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အက်ဆစ် ဓာတ်ပြင်းထန်မှုကိုပါ လျှော့ နည်းစေပါတယ်။
၁၀. သွားဆရာဝန် နှင့် ပုံမှန်မစစ်ဆေးခြင်း။ စတဲ့လွဲမှားနေတဲ့ ခံတွင်း
သန့် ရှင်းရေး ဆိုင်ရာအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်သင့် ပါတယ်။
Credit : အဝင်း